Baakad la sheegay inay ku jirtay Sunta Ricin oo loo diray M/weynaha Mareykanka ayaa la qabtay… – Hagaag.com
26 Oktoobar 2020 in English // Mali and France at odds over talks with Islamist militants…
26 Oktoobar 2020 in English // Tanzania’s ‘Bulldozer’ president hopes mega-projects impress voters…
26 Oktoobar 2020 in National // RW Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka QM ee Somalia Amb. James Swan…
26 Oktoobar 2020 in National // Nin horey u dilay askari ayaa lagu qisaasay fagaare ku yaala degmada Luuq ee gobolka Gedo…
26 Oktoobar 2020 in English // Russia strikes kill 78 Turkey-backed rebels in Syria: monitor…
Baakad la sheegay inay ku jirtay Sunta Ricin oo loo diray M/weynaha Mareykanka ayaa la qabtay…
Posted on 20 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Ilo wareedyo warbaahineed oo Mareykan ah ayaa shaaca ka qaaday in mas’ uuliyiintu ay qabteen maalmo ka hor baakad loo diray Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ay ku jirtay maaddada sunta ah ee “Ricin”.
Fariimaha boostada ee Aqalka Cad ayaa lagu kala saaraa oo lagu baaraa xarun ka baxsan goobta inta aan la aqbalin ka hor, waxaa jiray laba tijaabo oo la qaaday si loo xaqiijiyo jiritaanka maaddadan ku jirta baakadka.
Ilo wareedyo warbaahineed ayaa soo wariyay in sirdoonka Mareykanka iyo FBI-da Federaalka ay baarayaan arrintan.
Maaddada “Ricin” waa sun khatar leh, haddii la cunana waxay keentaa lallabbo, matag, iyo dhiig-bax gudaha ah oo ka dhaca caloosha iyo mindhicirada, waxaana ku xiga hawl gabka beerka, beeryarada iyo kelyaha, kuwaasoo keena dhimasho.
About Admin (11841 Articles)
Mali and France at odds over talks with Islamist militants…
Tanzania’s ‘Bulldozer’ president hopes mega-projects impress voters…
Russia strikes kill 78 Turkey-backed rebels in Syria: monitor…
Dowlada Fransiiska ayaa tarxiishay qoys reer Bosnia ah oo u diiday gabadhooda inay guursato nin…